Daawo sawiro xanuunbadan oo ah mid ka mid ah dhacdooyinkii Zoope
Amassive bomb attack in a busy area of the Somali capital Mogadishu on Saturday is now known to have killed at least 230 people, police say.
Ma yara Murugada iyo xanuunka uu reebay qaraxii xooganaa ee 14-kii bishan ka dhacay Isgooska Zoobe ee magaalada Muqdisho, waxaa qaraxaasi noloshooda ku waayay dad ku dhaw 400-qof oon qaarkood la helin hilbahooda.
Allah u naxariistee Cabdilaahi Maxamuud Siyaad (Yariisow) waxa uu kamid ahaa dadkii faraha badnaa ee ku dhintay qaraxii Zoobe, aabahan waxa uu ahaa nin ka xoogsan jiray dalaalnimo gaar ahaan waxa uu dalaal ka ahaa Geella lagu iibiyo Afgooye.
Qaraxii Zoobe ayaa indhaha ka riday qoysas badan oo Soomaaliyeed, waxa uuna qaraxan ahaa kii ugu xanuunka badnaa ee ka dhaca Soomaaliya ee galafta nolosha boqolaal qof oo masakaiin ah, qaraxan ayaana ahaa mid si weyn looga dareemay meelo badan .
As the trial for the man who shot and killed Isahak Muse wraps, here’s what…
WARKA 29 06 2018 Gudiga cadaalada xilidhibaanada aqalka sare oo kulan la qaatay wasiirada cadaalada…